what, when, why: प्रधानमन्त्रीहरुको बैठक
﻿तीन देशको प्रधानमन्त्रीहरुको बैठक थियो ।
अमेरिका , जापान अनि नेपाल ।
अमेरिकाका प्रधानमन्त्री भन्नुहुनछ : हाम्रो देशको
मान्छेहरुले आकाश छुने जहाज बनाएका छन् ।
नेपाल र जापानका प्रधानमन्त्री एकै साथ
(अच्चम मान्दै) : आकाश छुने जहाज !!
अमेरिकाका प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल सम्म मात्र ।
जापानका प्रधानमन्त्री : हाम्रो देशका मान्छेहरु उफ्रेर चन्द्रमा छुन् सक्छन् ।
नेपाल र अमेरिकाका प्रधानमन्त्री (अच्चम मान्दै): चन्द्रमा छुन् सक्छन् !!??
जापानका प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल सम्म मात्र ।
अब पालो नेपाली प्रधानमन्त्रीको (के भनौ- के भनौ भन्ने सोच्दा-सोच्दै)
हाम्रो देशको मान्छेहरुले नाकले खाना खान्छन् ।
जापानका प्रधानमन्त्री अनि अमेरिकाका प्रधानमन्त्री
(अच्चम मान्दै): नाकबाट !!??
नेपाल प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल बाट ।
my page www.ecocorsa.it